Ahụike Uche Greenwich - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ahụike Greenwich
Bromley, Lewisham & Greenwich Mind na-enye ọrụ ndị a na Royal Borough nke Greenwich. Ọrụ ndị a dị maka naanị ndị bi na Greenwich.
Ndụmọdụ Greenwich na-enye ndị bi na Greenwich ndụmọdụ na-akwụghị ụgwọ. Nke a gụnyere nsogbu, mmekọrịta na ndụmọdụ gbasara ọdịbendị.
Greenwich Peer Nkwado na-agba ọsọ dị iche iche na nke dịgasị iche iche nke ndị otu nkwado na mmemme maka ndị okenye na-enwe nsogbu ahụike ọgụgụ isi.
Lọ ọgwụ gaa n'ụlọ
Na-agba ọsọ na mmekorita ya na Oxleas NHS Foundation Trust, Hospitallọ Ọgwụ na Home bụ ọrụ nkwado agbakwunyere iji mee ka onye ahịa si na nnukwu ngalaba ahụike ọgụgụ isi laghachi na obodo dị ka nke ọma.
Ọrụ Nkwado Ọrụ IPS na-enyere ndị bi na nsogbu ahụike ọgụgụ isi aka ịchọta ọrụ ma bie ndụ onwe ha.
Nkwado maka ndị were gị n'ọrụ bụ ọrụ ọrụ na-akwụghị ụgwọ na-enyere ndị otu nọ na Greenwich na gafee London aka ime mgbanwe dị mma na usoro mbanye ha.
Uru Nyocha Nkwado na-enyere ndị toworo eto na-enwe nsogbu ahụike ọgụgụ isi aka ịkwadebe maka na ịga nyocha elele.
Uche nwere uche na-enyere ụmụ nwanyị dị ime na ndị nne ọhụụ aka ilekọta ahụike nke ahụike ha na afọ ime ha na n'afọ mbụ nke ndụ nwa ha.
Njikọ Obodo Na-ejikọ Aka na-enyere ndị na-eji ọrụ ọkachamara aka ijikwa mgbanwe iji ọrụ ndị isi.